काँग्रेसको केन्द्रिय समितिमा नुवाकोटका ७ जनाले दिए उम्मेदवारी - Khabar Page
काँग्रेसको केन्द्रिय समितिमा नुवाकोटका ७ जनाले दिए उम्मेदवारी
प्रितिका थापा २५ मंसिर २०७८, शनिबार १७:२० मा प्रकाशित
विदुर । नेपाली काँग्रेसको जारी १४ औं महाधिवेशनमा हालसम्म नुवाकोटका ७ जना नेताले केन्द्रिय समितिका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । शनिवार उनीहरुले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । जिल्लामा विभाजित देखिएका केही नेताहरु केन्द्रमा भने एउटै कित्तामा उभिएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका बर्तमान सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्यानलबाट छन् । त्यस्तै, उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका डा. रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसीले भने केन्द्रिय सदस्य पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिएका छन् । उनीहरु दुवै अहिलेपनि काँग्रेसको केन्द्रिय सदस्य हुन् । दुवै जना पौडेल समुहका हुन् । जिल्लामा स्थानीय तहदेखि जिल्ला तहसम्मको निर्वाचनमा भने उनीहरु एक अर्कासंग भिडेका थिए । यस्तै अर्का केन्द्रिय सदस्य बहादुरसिंह लामा तामाङले पुनः केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । यस्तै नुवाकोट काँग्रेसका पुर्व सभापति ध्रुब अधिकारीले पनि केन्द्रिय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । अधिकारीले बागमती प्रदेशबाट केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । अधिकारी देउवा टिमबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।
यस्तै नुवाकोटका अन्य केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवार दिनेहरुमा सिता मिजार र चोकराज शाक्य पनि छन् । नुवाकोटका प्रमोदहरि गुरागाँइले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । तर उनी पछिल्लो समय आफ्नो सदस्यता काठमाडौंमा सारेर उतैबाट राजनीति गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको सभापतिका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट उपसभापतिमा विजयकुमार गच्छदार र पूर्णबहादुर खड्का उम्मेदवार बनेका छन् । यस्तै महामन्त्रीमा प्रकाशशरण महत र प्रदीप पौडेल उम्मेदवार भएका छन् । महत निवर्तमान सहमहामन्त्री हुन् भने पौडेल कृष्ण सिटौला समूहका उम्मेदवार हुन् । संस्थापन समूहबाट टिकट नपाएपछि विश्वप्रकाश शर्माले प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका छन् । महामन्त्रीका आकांक्षीद्धय बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केन्द्रीय सदस्यमा मात्र उम्मेदवारी दिए ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्यानलसहित सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् । रामचन्द्र पौडेल समूहबाट कोइरालासँगै पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन् । तर पौडेल समूहका बहुसंख्यक नेताहरु शेखरको टिममा अटाएका छन् । कोइरालाको प्यानलबाट उपसभापतिमा चन्द्र भण्डारी र धनराज गुरुङ उम्मेदवार बनेका छन् भने महामन्त्रीमा डा. मिनेन्द्र रिजाल र गगनकुमार थापा छन् । ८ सहमहामन्त्रीमा दलिततर्फबाट जीवन परियार, महिलातर्फ कमला पन्त, मधेसीतर्फ रामकृष्ण यादव, थारुतर्फ तेजुलाल चौधरी, जनजातितर्फ विकास लामा, खसआर्यतर्फ देवराज चालिसे र अल्पसंख्यकतर्फ बद्री पाण्डेले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका नितर्वमान महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् । डा. शेखर कोइरालाको प्यानललाई समर्थन गर्दै शशांकले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएका हुन् । १२ औं महाधिवेशनबाट महामन्त्री निर्वाचित शशांक सभापतिकै दावेदार थिए । तर उनले शेखरलाई समर्थन गरेका छन् । शशांक भन्दा अगाडि शेखरलाई समर्थन गर्दै अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी र रामशरण महतले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् ।
यसै बीच, वीरगञ्जकी उपमेयर शान्ति कार्कीले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । ९१ वर्षीय कार्कीले महिला खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी हुन् । स्वच्छ काङ्ग्रेस र महिला अधिकारको लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको उपमेयर कार्कीको बताइन् । वीपीबाट प्रभावित भएर काङ्ग्रेसमा सक्रिय भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा कल्याण गुरुङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । भृकुटिमण्डपमा बिहान १० बजेदेखि नै उम्मेदवारको मनोनय दर्ता सुरु भएपछि गुरुङले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने गुरुङ पहिलो हुन् । गुरुङले यसअघि नै पत्रकार सम्मेलन गरी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए । गुरुङ केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
एउटा व्यक्ति समानुपातिकतर्फ एक पटक मात्र सांसद हुन पाउने, मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि दुई पटक मात्र हुन पाउने व्यवस्था संविधानमा नै गर्न पहल गर्ने उनको एजेण्डा छ । यस्तै सहमहामन्त्रीमा मानबहादुर विश्वकर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
यस्तै कांग्रेसको सभापतिमा गोरखाका युवराज न्यौपानेले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । न्यौपाने गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका हुन् । नेतृत्वमा युवाको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मुद्दा रहेको उनले बताए ।
उम्मेदवारहरुले आफ्नो मनोनय फिर्ता लिने समय भने आइतवार दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म तोकिएको छ । मतदान मंगलवार बिहानबाट हुने छ ।
२५ मंसिर २०७८, शनिबार १७:२०